အိမ်နီးချင်း ထိုင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာ ပြောမဆုံးအောင်လေးစားအားကျခြင်း ခံနေရတဲ့ မြရည်နှင်းလွင် ရဲ့ ဗီဒီယို……. – Cele Oscar
အိမ်နီးချင်း ထိုင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာ ပြောမဆုံးအောင်လေးစားအားကျခြင်း ခံနေရတဲ့ မြရည်နှင်းလွင် ရဲ့ ဗီဒီယို…….
ပရိသတျတှေ ခဈြခငျအားပေးရတဲ့ သရုပျဆောငျ မွနှငျးရညျလှငျကတော့ဇာတျလမျးတှဲတှကေနအေကောငျးဆုံး သရုပျဆောငျနိုငျခဲ့ပွီး လူသိမြားအောငျမွငျလာခဲ့တာဘဲ ဖွဈပါတယျ။မွနှငျးရညျလှငျ ကတော့ ပွညျသူ နဲ့ အတူအမှနျတရားဘကျက ရပျတညျပွီး အောငျမွငျမှုတှေ ကိုစှနျ့ လှတျခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
မွနှငျးရညျလှငျ ကို ပုဒျမ ၅၀၅ က နဲ့ ဖမျးဝရမျး ထုတျခဲ့ပွီး ဖမျးဆီးဖို့ကွိုးစားပမေယျ့ မွနှငျးရညျလှငျ ကတော့လှတျမွောကျနယျမွကေိုသှားရောကျကာဆကျလကျတျောလှနျနေ တာလညျးဖွဈပါတယျ။အနုပညာရှငျ တဈယောကျဖွဈပမေယျ့ကွမျးတမျးတဲ့ တောထဲမှာ လကျနကျကိုငျပွီး ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့တျောလှနျနတော လညျးဖွဈပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့သရုပျဆောငျ မွနှငျးရညျလှငျ ကိုထိုငျးလူမြိုးတှကွေားမှာလေးစားဂုဏျယူနကွေပွီး ရဲရငျ့တဲ့သူ တဈယောကျအနနေဲ့သတျမှတျကွတာဖွဈပါတယျ။ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျ တငျဆကျ ပေးလိုကျပါတယျ။
ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ သရုပ်ဆောင် မြနှင်းရည်လွင်ကတော့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကနေအကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး လူသိများအောင်မြင်လာခဲ့တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။မြနှင်းရည်လွင် ကတော့ ပြည်သူ နဲ့ အတူအမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ကိုစွန့် လွတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မြနှင်းရည်လွင် ကို ပုဒ်မ ၅၀၅ က နဲ့ ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခဲ့ပြီး ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားပေမယ့် မြနှင်းရည်လွင် ကတော့လွတ်မြောက်နယ်မြေကိုသွားရောက်ကာဆက်လက်တော်လှန်နေ တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်ကြမ်းတမ်းတဲ့ တောထဲမှာ လက်နက်ကိုင်ပြီး ရဲရဲဝင့်ဝင့်တော်လှန်နေတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့သရုပ်ဆောင် မြနှင်းရည်လွင် ကိုထိုင်းလူမျိုးတွေကြားမှာလေးစားဂုဏ်ယူနေကြပြီး ရဲရင့်တဲ့သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့သတ်မှတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည် တင်ဆက် ပေးလိုက်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ထန်တလန်မြို့လေးအတွက် Speak Outလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် အလင်းရောင်……..
Seymour Cassel Award For Best Performance ဆုကို Happened To The Wolf ရုပ်ရှင်မှ သရုပ်ဆောင် အိန္ဒြာကျော်ဇင် မှ ဆွတ်ခူး……..